सिन्दूर किन नलगाएको त ?
स्कुलमा पढ्दा सुनेकाे थिए, एउटा झुट लुकाउन, सय झुट बोल्नुपर्छ भनेर । त्यसैले पनि झुट बोल्ने बानी थिएन । राम्रो होस् वा नराम्रो कुरा मलाई झुट बोल्न मन पर्दैन पनि । जे हो सहि कुरा बताउने, सोझी नै थिए म । तर पहिलोपटक यति धेरै झुट बोलियो । अनि हुदै नभएको श्रीमान्को पनि खुबै प्रशंसा गरियो ।
झुट बोल्दा आफूलाई र अरुलाई पनि हानी हुदैन भने समय र परिस्थिती अनुसार कहिलेकाहीँ झुट बोल्नु पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने धेरैका तर्क सुनेको थिए । जब भोगियो, त्यसपछि यो तर्कको महत्व थाहा भयो ।
‘छोराछोरी कतिजना छन् तपाईको ?’ यो मेरो लागि अनौठो प्रश्न थियो । किनकी म अविवाहित हुँ । अविवाहित भएको कारणले मात्रै होइन, कार्यालय होस् वा अन्य ठाउँमा सबैले मलाई सानी देख्थे । कार्य शिलशिलामा परिचित बनेका केही साथीहरुले सानी देखेरै नै होला, फुच्ची भन्छु है भन्दै जिस्काउँथे पनि ।
त्यसैले पनि मेरो लागि अनौठो प्रश्न थियो त्यो । सधैं जिस्कने हाँस्ने अनि साना कुरामा पनि धेरै रमाउने म । मलाई मज्जासँग हास्ने ठूलो बहाना भेटिएको थियो । मनले त बेजोडले हाँसिसकेको थियो । तर त्यो हाँसोलाई मनमै दबाए ।
केही समयपछि निकै संयमतापूर्वक नहाँसि जफाव दिए । ‘मेरो छोराछोरी छैनन् दाइ ।’
मनमनै सोचे, ‘मलाई सानी नदेख्ने पनि भेटिए आज ।’ ओठको हाँसो लुकाए पनि मनले हाँसो कन्ट्रोल गरेकै थिएन ।
उसले मेरो जवाफ कुरेरै बसेको रैछ । ‘विहे नै भएको छैन होला ?’ जिस्कने शैलीमा अर्को प्रश्न छिटै गरिहाल्यो ।
मेरो दिमागले पनि ढिला गरेन ‘यो मान्छे मसँग जिस्कन खोज्दैछ’ भन्ने सोच्नलाई । जिस्काउने बहाना दिनु हुँदैन भन्ने लाग्यो ।
‘होइन दाई विहे त भइसक्यो, म विवाहित नै हुँ ।’ मैले नसोचेको प्रश्नप्रति जवाफ पनि नसोचैकै दिए ।
‘होइन होला ?’ मेरो जवाफलाई विस्वास गर्न तयार थिएन उ । किनकि उसले सोचेजस्तो पाउन सकेन ।
‘आठ महिना भयो बिहे गरेको, अहिले छोराछोरी त कसरी हुनु ?’
कुपन्डोलमा साथीलाई कुरेर बसेको दुई घण्टा भएको थियो । एक बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा पुग्नुपर्ने । त्यहाँ सबैजना जम्मा भएर शुक्रबार लप्सीफेदी जाने कार्यक्रम थियो । अफिसमा भोलिपल्टको लागि पनि फिचर समाचार दिएर म समयमै निश्किएको थिए ।
तर साथीलाई कुर्दा कुर्दा कुपन्डोलमै तीन बज्यो ।
सभागृहमा हामीलाई कुरेर बसेको बस पनि हिँडिसक्यो भनेर फोन आयो । यता २ घण्टा कुुराएकी साथीले आफू साँझ ५–६ बजे मात्रै जाने भनेर म्यासेन्जरमा जवाफ पठाइ । म अफिसमा जानकारी गराएरै एक बजे नै निस्किसकेको थिएँ । अब फेरि ५–६ बजेसम्म त्यही ढिला गर्ने साथीलाई कुरेर बस्ने धैर्यता थिएन मसँग । बरु नजाने भनेर जानकारी दिए ।
सभागृहबाट छुटिसकेको बसले चावहिलमा हामीलाई नै पर्खिरहेको छ भनेर फेरि फोन आयो । हामीलाई ट्याक्सीमै चावहिलसम्म आउनु भनेर आयोजकबाट फोन आयो । कुपन्डोलकै बस स्टेसन नजिक उभिएको थिए म । म नजिकै एउटा ट्याक्सी रोकिएरै बसिरहेको थियो । नजिकै गएर सोधे, ‘दाइ चावहिल जाने ?’
‘बस्नुस् न लग्दिन्छु ।’
‘कति हो नि भाडा ?’ मैले सोधे ।
‘टाढा नै छ ४ सय रुपैयाँ ।’ निकै ढिला भएको थियो । अरु प्रश्नै नगरी म ट्याक्सीमा बसे । थापाथली पनि नपुग्दै जाममा परियो । म फोनमा व्यस्त थिए ।
‘दाइ यहि जाममा परियो । धेरै समय लाग्छ जस्तो छ है ?’ दिक्क मान्दै मैले सोधे ।
‘खै आधाघण्टा त लाग्छ होला ।’ उसले इग्नोर गरेको शैलीमा जवाफ दियो ।
‘दाइ जताबाट छोटो बाटो छ, त्यहिँबाटो लैजानुस् है ।’ मैले आग्रह गरे ।
जाम खुल्यो । उनले हुन्छ भन्दैं माइतिघरबाट सिहंदरबारको बाटोतर्फ ट्याक्सी मोडे । सिहंदबारबाट अनामनगर जाने सडकमा पनि लामै जाम थियो ।
जाममा भएकै बेला ट्याक्सी ड्राइभरले सोधे, ‘छिटै पुग्नुपर्ने छ होला है । चिन्ता नगर्नु, भित्री सडकबाट अलि छोटोपर्छ त्यहिँबाट जाउँला ।
मैले हाँसेर मात्रै प्रतिक्रिया दिए ।
उसले साेध्याे, ‘बहिनीको अफिस चै कुपण्डोलमा ?’
‘अनि घर कहाँ हो नि ?’
‘धादिङबेशी’ सहजै उत्तर दिए ।
‘ए होर, म नि गएको छु धादिङ त । सिम्ले, आदमघाट, बैरेनी भन्ने ठाउँहरु छ हैन ?’
‘हो हो छ ।’ आफ्नो जिल्लाको कुरा गर्दा जो कोही पनि सहजै बोल्छन् नै । त्यसो त नबोलिकन बस्ने, मेरो बानी पनि छैन । उसले सोधेको कुराको सिधा जवाफ दिए ।
‘तपाइको थर के हो नि ?’ नाम भन्दा पहिला थर के हो भनेर सोधे ।
‘लम्साल’ थरमात्रै बताए । छिटै सोधिहाले ‘लम्साल भन्या के हो ?’
मेरो थरको बारेमा डिटेलमा किन सोध्नुपरेको होला, मलाई झ्याउ लाग्यो ।
मैले नि भन्दिए, ‘लम्साल भन्या थर ।’
‘मलतब बाहुन कि क्षेत्री हो लम्साल थर ?’
‘लम्साल बाहुँन, क्षेत्री दुवै हुन्छन् । म क्षेत्री हुँ ।’ धेरै डिस्कस गर्न मन थिएन । त्यसैले सिधा जवाफ दिए ।
‘छोराछोरी कतिजना छन् तपाईको ?’
आफ्नो छोराछोरी नभएको कुरासम्म पनि सत्य नै बताएको थिए ।
उसले मेरो विहे भएको कुरा पत्याएकै थिएन । म उसको ट्याक्सीमा पछाडि सिटमा बसेको थिए । उसले आफ्नो अगाडि रहेको लुकिङ ग्लास मेरो फेस देखिने गरी मिलायो । मोवाइल चलाउँदै गरेपनि मैले देखेको थिए, मेरो ध्यान मोवाइमै थियो ।
‘विहे गरेको भए खै त सिन्दूर लाउनु भएको ?’ मेरो नजर मोवाइलबाट अगाडिको लुकिङ ग्लासमा पुग्यो । उसले मलाई नै हेरिरहेको रैछ । मभन्दा पनि मेरो खाली रहेको सिउँदोमा उसको नजर थियो । मेरो दाइने हात निधार हुँदै सिउँदोमा पुगिसकेको थियो । ‘विवाहित भएको भए सिन्दूर लगाउँथे वा लगाउँदिन थिए’ यो विषयमा मैले सोचेको थिइन । सोच्ने समय नै भएको थिएन, कसरी सोच्नु ।
लौं अब के भन्ने म एकछिन ट्वाँ परे । सिउँसोसम्म याद गर्न भ्याएछ, उफ् ।
विवाह गरीसकेका साथीहरुलाई संझन पुगे । उनीहरुले अफिस र कजेल जाँदा सिन्दूर लगाउदैनथें । केही दिन अघि कलेजमा विवाहित साथी लक्ष्मीले विवाह पछिको लाइफको बारेमा धेरै नै बताएकी थिइ । लक्ष्मी विवाहित हुन् भनेर सुरुमा हामीले पनि पत्याएका थिएनौं । ज्याकेटको चेन फुकालेर घाटीमा रहेको रातो पोतेको माला देखाएर मोवाइलमा आफ्नो श्रीमान्सँगै बसेको फोटो समेत देखाएपछि मात्रै विस्वास गरेका थियौ, लक्ष्मी विवाहित हुन् भनेर । किनकी उनी हाम्रै उमेरकी थिइन् । कलेजमा पनि सँगै पढ्ने । उनको सिउँदोमा सिन्दुर छ या छैन भनेर मैले कहिल्यै हेरिन् । उनले हामीलाई विवाहित हुँ भनेको दिन उनको सिउँदोमा सिन्दूर थिएन । उनले आफु घरमा बस्दा मात्रै सिन्दूर लगाउने गरेको बताएकी थिइन्् ।
‘विवाह भइसक्यो भनेर झुक्याउनु भएको ?’ ट्याक्सी ड्राइभरको अर्को प्रश्न तेर्सियो ।
‘आजभोली बाहिर हिड्दा नि के सिन्दूरपोते लगाएर हिड्नु, विहे गरेको भन्दैमा सिन्दूर लगाएर हिड्नुपर्छ र ? बाहिर हिड्दा त म सिन्दूर लगाउँदिन ।’ साथीले भनेको कुरालाई संम्झदै मैले कपि–पेस्ट जवाफ फर्काए ।
‘बिहे गरेको भए पछि चिनिने गरी हिँड्नुपर्छ नि ? सिन्दूर लगाएर हिड्नुपर्छ ।’ अब उसले म विवाहित भएको कुरा पत्यायो सायद ।
तर उसले भनेको, ‘बिहे गरेपछि चिनिने गरी हिँड्नुपर्छ’ भन्ने शब्दले भने मेरो दिमाग तात्यो ।
‘बिहे गरेका महिलाले चिनिने गरी नै किन हिड्नुपर्ने ? महिलाले किन सधैं सिन्दूर लगाएर हिड्नुपर्ने ? अनि पुरुष विवाहित हुन् भनेर चिनिने कसरी नि ? उनीहरु चाहिँ विवाहित हुन् भनेर चिनिनु नपर्ने ?’ यी सबै प्रश्नमा उसलाई मनभरिको जवाफ फर्काए ।
‘सिन्दूर त घर जाँदा मात्रै लगाउँने हो । अफिस जाँदा कहाँ सिन्दूर लगाएर हिड्नु । खै मेरो श्रीमान्ले त केही नि भन्नुहुन्न सिन्दूर नलगाउँदा पनि,’ उसको ‘इरादा’लाई गलत सावित गर्न हुँदै नभएको श्रीमान्को पनि प्रसंशा गर्नैपर्यो ।
‘विवाह नै गरीसकेको भए, सिन्दूर लगाएर हिड्दा कसैले आँखा लगाउँदैनन् । सिन्दुरले सुरक्षा पनि दिन्छ नि । त्यसैले सिन्दूरलगाएर हिड्ने गर्नु,’ उ पनि आफ्नो मान्यतबाट पछि हट्ने संकेतमा थिएन ।
तर उसका तर्क जति सुन्यो त्यति ‘इरिटेट’ गर्ने खालका ।
‘सिन्दूरलगाउँने महिला मात्रै सुरक्षित हुन्छिन् र ? के अविवाहित नारीहरु सबै असुरक्षित छन् त ?’ उसका तर्कमा सहमत हुने पक्षमा थिइन् म ।
‘यो काठमाडौं हो । के भन्न सकिन्छ र ! यहाँ धेरै थरिका मान्छे हुन्छन् । विवाह गरेको हो भने त्यति वास्ता हँुदैन । अनि सुरक्षा मात्रै होइन । बिहे नगरेको भए त साथी बनौं, प्रेम गरौं भन्नेहरु पनि हुन्छन् । विवाह गरिसकेकालाई माया गर्दा अर्को समस्या हुन्छ । गरिसकेकोलाई त मनपराउनु भएन नि !’ उसले आफ्नो ‘औकात’ देखाउनै शैलीको जवाफ दियो ।
‘सिन्दूरलगाएर हिड्ने गर्नु । नत्र अरुले जिस्काउछन् । राम्री हुनुहुन्छ अरुले मन पराउँन सक्छन् ।’
म कन्फम भए । यदि मैले बिहे गरेको छैन भनेको भए उ मलाई पक्कै जिस्काउँथ्यो ।
म अविवाहित हुँ भन्ने मलाई मात्रै थाहा थियो । ती ट्याक्सी ड्राइभरले त म विवाहित नै हुँ भन्ने सोचेको थियो । त्यसैले विवाहित जस्तै बनेर जवाफ दिनुपर्ने थियो ।
‘बाटोमै देख्दा मनपर्ने, माया गर्ने नि हुन्छन् र ? आफु सही बाटो हिँड्यो भने कसले जिस्काउँछ । के गर्न सक्छ । यदि सिन्दुरले नै नारीको सुरक्षा हुने भए त बिहे नगरेका बहिनीहरुलाई पनि सिन्दूर लगाएर हिँड भन्नुपर्यो,’ आक्रोश मिश्रित शैलीमा मैले उसलाई सोध ।
उसले मेरो सवाललाई फिस्स हाँसेर टार्यो ।
ट्याक्सी चावहिल चोकको जाममा पुगेको थियो । म ओर्लने ठाउँ नजिकै पुगिसकेको थिए । त्यो एकछिनको जामले पनि दिक्क बनाएको थियो मलाई । म घरी मोवाइल र घरी सवारी चापले अस्तव्यस्त बनेको चावहिल चोक हेर्दै थिए ।
१० मिनेटको पट्यार लाग्दो पर्खाइपछि जाम खुल्यो ।
‘तपाईँलाई कहिले पुगुम् जस्तो भएको होला, मलाई त जाम भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ,’ जाम खुलेपछि मतिर हेरे मुख मिठ्याउँदै उसले भन्यो ।
उसको गलत इरादाबारे म पहिलेदेखि नै जानकार थिए । झर्ने ठाउँमा पुग्दा उसले गर्ने प्रश्नको सामना गर्ने साहस भने बढेको थियो ।
‘दाई तपाईंलाई त जाम नहुँदा पो फाइदा हुन्छ त । मलाई छिटै पुर्याउनुभो भने अर्को प्यासेन्जर बोक्न पाउनुहुन्छ,’ हातमा सय–सयका ४ नोट थमाउँदै मैले उसलाई भने ।
‘पैसा मात्रै ठूलो कुरा होइन नि,’ मैले दिएका सयका ४ नोट आफ्नो पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा कोच्दै उसले भन्यो ।
म भने उसको मुख पनि नहेरी ट्याक्सीबाट उत्रिएँ ।
प्रदेश राजधानी माग्दै कांग्रेसको खबरदारी सभा बुटवल— नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले आज (बिहीबार) बुटवलमा जनप्रर्दशन तथा खबरदारी सभा गर्दैछ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयविना नै कांग्रेस रूपन्देहीले बुटवल प्रदेश पाँचका राजधानी घोषणा गर्...